isifo "Wezingane" ajwayelekile kubazali. Bona ugqozi kuye esithile, kodwa izingane ngempela ethule - Zithwala kubo kakhulu ngaphandle nobunzima, lezi zifo zenzeka esisodwa.
Nokho, lezi zifo ngempela esikhohlisayo. Far kusukela amadoda imithi alazi kangakanani kungaba yingozi okuthiwa isifo "zezingane". Phakathi kwabo, phakathi kwezinye izinto, inani kanye upokisi, abaningi abacabanga into engenangqondo, efana thimula umkhuhlane noma ngephutha.
Uma unolwazi oluthile, ungakwazi ngempela uqinisekise ukuthi abazi batheleleke nge upokisi. Okokuqala, it is esibangelwa igciwane leqembu herpes. Noma ubani oke waba kwadingeka sezindebeni le "imfiva", uyazi bona kubuhlungu kangangani kungaba. Ngaphezu kwalokho, upokisi esithathelwanayo kakhulu. Uma ingane enkulisa iza isifo (inqobo nje uma engenzi ukuzibonakalisa ngaphandle, kodwa ekuqaleni ukusakaza), licembu lonkhe, bese wonke engadini kuyoba egula ngesonto. Izindaba ezinhle wukuthi izingane ngokuvamile ahlupheke upokisi kulula. I ezimbi: izinsana, abesifazane abakhulelwe kanye nezingane ongakazalwa, abadala kuphela siyingozi. Futhi ngezinye izikhathi ebulalayo.
Ngenhlanhla, upokisi lenzelwa ngokuyinhloko amaconsi sisemoyeni. Ungakwazi yini ukuthola upokisi ngenye indlela? Eyesibili (nendlela ingasaphathwa ezivamile) ukutheleleka - ngokuthinta isikhumba kakade owayegula umuntu: Ukutheleleka kwenzeka ngokusebenzisa amabhamuza ezakhiwe upokisi. Ezinye izindlela alikho.
Odokotela bakholelwa ukuthi "Isikhathi sasebuntwaneni" izifo ziye Bekungafanele zisencane ezifanele. Ngakho akufanele sicabange, abazi ungenwe upokisi; kufanele aqaphe isimo epidemiological emhlabeni indodana yakhe. Kodwa futhi avuse ukugula okungazelele akufanele: ukubona ngesineke oluhlaza upende umntwana ngenkathi ehamba nengane yabo siqu - shiya eceleni. Namanje naso isikhathi sokusukuma kunokulindelekile.
Kodwa uma ingane emndenini eyodwa, kodwa namanje omunye kubantu abadala e ingane akamazi "charm" igciwane, kubalulekile ukuba nginakekele ukuze ungenwe upokisi, elingafunwa kungaba yingozi. Indlela eyisisekelo namanje ngokuhlukaniswa. Kodwa ukuzihlukanisa ngokuphelele ingane kubazali bakhe nodade-abazalwane ezinesihluku kakhulu. Uma ezinye izingane umndeni umdala ngokwanele, ungazama ukubafundisa ingamthinti Bubbles umzimba kwesihlobo futhi ukugqoka ngebhandeshi yezokwelapha phambi kwakhe.
izenzakalo ezimbi ngokwedlulele
Nokho, kukhona abantu ngokuphelele akakwazi ubuhlungu ingxibongo zezingane. Lezi zihlanganisa abantu abane-HIV, umdlavuza iziguli (ikakhulukazi hematologic), labo abasanda besibhekene nokwelashwa ngamakhemikhali, imindeni enezingane eziningi (uma umama anayo enye ingane, futhi ingane nge upokisi akuyona ogulayo, noma ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-izinyanga eziyisithupha). Ezimweni ezinjalo, le nkinga inga- itheleleke nge upokisi, lifana umbuzo yokufa nokuphila. Bese uzokwethula umgomo. odokotela Russian kakade unazo walo "Varilriks" noma "Okavaks" ngesikhathi. Kubo - kuphela lasemtholampilo, nemakethe ezamahala izinsiza azitholakali.
Nokho, kukhona imikhawulo: umgomo hhayi iqondiswa kwabesifazane abakhulelwe. Uma isimo epidemiological of upokisi sizungezwe abukhali, omama abakhulelwe can yokwelapha bangisekela kuphela yakhelwe ukunciphisa ububi besimo sokuguquka lesi sifo futhi ukunciphisa umonakalo kungenzeka ezingenzeka embungwini. Ngokuvamile kuziwa phansi, "Acyclovir" futhi "tsikloferon" - kudokotela uyonika wonke ama-aphoyintimenti.
I Pox ubuso omdala
isifo esikhohlisayo kakhulu - upokisi. Kanjani ukuba uthole abadala elinegciwane abangazange kwadingeka ke njengoba ingane, kufanele Usacabanga ngalokho. Ezimweni eziningi, indoda ovuthiwe kuletha kunzima. Ukuqubuka avele hhayi kuphela esikhumbeni, kodwa futhi ku nolwelwesi lwamafinyila, futhi ulcer emlonyeni futhi zibulawe indlala isikhathi eside. Futhi kukhona izilonda ezindaweni buhlungu futhi ungakhululekile. Ngaphezu kwalokho, abadala umuntu, le kakhulu ngemiphumela: emva kweminyaka amathathu we kungenzeka yesihlanu ukuwohloka kusukela upokisi. Ngezinye izikhathi AMANXEBA isikhumba.
Futhi akusiyo ubaluleke kakhulu kangakanani ukuba uphumule labo kakade waphathwa ingxibongo. On umbuzo ukuthi ungakwazi batheleleke nge upokisi okwesibili, odokotela wemfanelo, ukuthi kungenzeka. Ngokucacile, lokhu kwenzeka kuyaqabukela kuphela nabantu abaye encishisiwe kanzima amasosha omzimba (okufana basengozini, futhi bazama ukuba isheshe, njengoba kuchaziwe kakade).
Nokho, igciwane ingxibongo akahambi kude nomzimba owayesegule, kodwa kungathi efihla. Ngakho umbuzo uwukuthi: "Ungakwazi yini ukuthola upokisi okwesibili?" - hhayi kakhulu efanele zavela. Phinda itheleleke akudingekile, isiguli wangaphambili usevele igciwane. Futhi ungaboniswa futhi lehliselwa amasosha omzimba (ngemva Umkhuhlane, isibonelo) ngesimo ezimise okwama-tile. Futhi ithemba belusizi kakhulu.
Eqinisweni ezithakazelisayo: izinsana upokisi kuyingozi kakhulu, kungaholela umonakalo ngesikhathi ubuchopho, kanye nanoma yikuphi izitho zangaphakathi. Nokho, uma izingane ezingaphansi kweminyaka engu-izinyanga ezintathu, waphathwa isifo, bagubha ke ngendlela elula. Futhi kulabo owakhulela izingane ngeke Ngibuza lo mbuzo: "Kungenzeka yini ukuba kabusha itheleleke nge inkukhu Pox?" Sinenkosi ukubuyiselwa okunjalo azenzeki!
Kafushane, musa nesinxi at izindaba endaweni yakho ngokushesha uvele usana waphathwa ingxibongo. Kodwa akufanele aphathe it kancane. Uma ungeyena umuntu egula ephethwe upokisi njengoba ingane futhi engafuni ukuzwa lezi emizweni ezimpilweni zabo omdala - bathathe isinyathelo. Okungenani - banakekele amasosha omzimba. Futhi noma kunjalo akunakwenzeka ukuba zigcwale amanzi futhi ngenxa yokwethuka!
Rhinitis Okungalapheki. Ikhaya Ukwelashwa
"Breakdancing" - okusho crazy